Maalinta: Meey 27, 2019
In kasta oo qaybta mitirka 3350 ee wadada la dhammeystirayo Waddada Kükürtlü, oo gebi ahaanba ay dayactireyso Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa, qeybta hadhay ee mitirka 400 ayaa la qorsheeyay in la dhammeeyo ka dib iidda. Dhibaatada ugu weyn ee aasaasiga ah ee Bursa [More ...]
Magaalada Istanbul ee caasimadda, codsiga basaska khaaska ah ee bisha Ramadaan illaa bisha muwaadiniinta ayaa arkaan baahi weyn. Marka laga reebo meelaha quduuska ah, dadka deggan Istanbul waxay si sahal ah u gaari karaan goobaha hawlaha basaska gaarka ah ee Istanbul, Maltepe, Yenikapı iyo Sultanahmet. [More ...]
Alstom wuxuu siiyay tareen aan wali lahayn oo loo adeegsan karo line B ee shabakadda Lyon. 30 bilood ka dib bilowga mashruuca, sida la qorsheeyey, 25 waxay gaartay bakhaarada La Poudrette bishii Abriil iyo 5.000 km shan bilood oo Valenciennes [More ...]
Xubin ka tirsan Xisbiga AK Party iyo MKYK Malatya Öznur Çalık, barnaamijka '3 iftar' ayaa kaqeybgalay munaasabaddan laanta dhalinyarada. Halkan, daraasadaha Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee 'ıalık Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ iyo Elazığ-Diyarbakır [More ...]
Kaarka Kaarka Meelaha Magaalada ah oo laga soo siiyay Sivas
Dowladda hoose ee Sivas, oo u fududeysa nolosha muwaadiniinta adeegyada caqliga leh ee Degmooyinka, ayaa dhowaan bilaabay inay ku faafiso mashiinnada kaararka rarka magaalada oo lagu bixiyo magaalada oo dhan. Labada tusaale ee ugu horeeya waxaa laga keenay nolosha Cumhuriyet University iyo Hikmet Işık Street. [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare 2023
Xisbiga Jamhuuriga ee (CHP) Sivas xigeenka Us Karasu, 2019 dhamaadkii sanadka ayaa la filayaa in ay bilaabaan tijaabada wadidda iyo Ankara sida ku cad geli lahaa hawsha 2020-Sivas High Speed ​​Tareen (GLR) Baro meesha Turkiga [More ...]
Miyuu sii kordhayaa tirada macaamiisha Bariga Express Expedition ama hoos u dhigayaa?
Tirada duullimaadyada Bariga Express, oo noqday mawduuca xiisaha loo qabo ee Kars, miyuu kordhayaa ama yaraanayaa maalmihii dhawaa? Ammaan darida Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Erol Arikan, ayaa bayaan soo saaray. Arıkan wuxuu yidhi, “Tareenka wajigiisu danaynayo [More ...]
Golaha Agaasimayaasha Renault waxay go’aansadeen inay tixgeliyaan suurtagalnimada isku darka 50-50 ee lala yeesho Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Guddiga Agaasinka ee RENAULT wuxuu awood u leeyahay inuu ka dhaco inta udhaxeysa Renault SA iyo FCA (Fiat Chrysler Automobiles). [More ...]
Sumela keniisad ah xarunta dalxiiska muhiim ugu Turkey ayaa la furay si ay u soo booqda in meesha ugu horeysa. Wasiir ku xigeenka Dhaqanka iyo Dalxiiska Nadir Alpaslan iyo dib u soo celinta Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy laga soo bilaabo maalintii uu xafiiska la wareegay. [More ...]
Waxqabadka degdega ah ee waddooyinka la xiro ee Roobka ee Eskisehir
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay u gurmatay muwaadiniinta ku nool miyiga. Dayactirka iyo Dayactirka Dhismaha Wadooyinka ee dhex go'ay Wadooyinka Magaalada Carib ee Degmada Sarıcakaya iyo Degmada Karaoğlan ee Degmada Mihalgazi roobka da’ay awgeed [More ...]
Dowlada Hoose ee Antalya, wadada cusub ee udhaxeysa Kas iyo Bezirgan iyo xaafadaha Kalkan asphalt, ayaa loosoo bandhigay adeegga muwaadinka. Waaxda Adeegyada Degmooyinka ee Magaalooyinka waaweyni waxay sii wadaysaa jidkeeda iyo laamiga ay ka shaqeyso Antalya oo dhan. [More ...]
Codsiga 'Socodka' ee Hababka Akhisar
Dowladda Hoose ee Manisa, oo ay bilaabayso Wasaaradda Arimaha Gudaha 81 si ay ugu talagasho badbaadada dadka lugaynaya ee mashruuca 'lugeeyaha lugta koowaad' ee bartamaha wadooyinka degmada Akhisar 'Codsiga Koowaad ee lugta'. Manisa weyn [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, si ay u tagaan on sale in 2022 ayaa ku dhawaaqday faahfaahinta gaariga ayaa la qorsheeyay Turkey. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in tusaalaha gaariga korontada uu soo bixi doono dhamaadka sanadkan, Wasiirka Warshadaha iyo Tiknolojiyadda Varank ayaa yiri: [More ...]